ဖြောင့်သို့မဟုတ်တံတောင်ဆစ် BSPT အမျိုးသားထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း - တရုတ်စက်ရုံ - Cixi Wenap အင်တာနေရှင်နယ်ထရေးဒင်း Co. , Ltd မှ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဟိုက်ဒရောလစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်း > အမျိုးအစား Tube Fittings ကိုက် > ဖြောင့်သို့မဟုတ်တံတောင်ဆစ် BSPT အမျိုးသား
အဆိုပါလမျးဖွောငျ့သို့မဟုတ်တံတောင်ဆစ် BSPT အမျိုးသား၏ကုန်ပစ္စည်း Parameter
SAE J514, SAE J1453, BS5200, DIN2353, DIN3865 စံချိန်စံညွှန်း။
JIC စီးရီး, BSP စီးရီး, Metric စီးရီး, ORFS စီးရီး, NPTF series နှင့် NPTM စီးရီး။
0 င် ~ 60Mpa
ကာဗွန်သံမဏိ, သံမဏိ, ကြေးဝါနှင့်ကြေးနီ။
1.plastic အိတ် 2.wooden သေတ္တာ 3. စက္ဏူထူ 4. သင့်ရဲ့တောင်းဆိုမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါလမျးဖွောငျ့သို့မဟုတ်တံတောင်ဆစ် BSPT အမျိုးသား၏ကုန်ပစ္စည်း Feature ကိုများနှင့်လျှောက်လွှာ
သံမဏိ၏ဖန်ဆင်း 1. ။
အဆိုပါလမျးဖွောငျ့သို့မဟုတ်တံတောင်ဆစ် BSPT အမျိုးသား၏ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
သင့်ရဲ့တောင်းဆိုမှုများကိုအမျှ4။
hot Tags:: ဖြောင့်သို့မဟုတ်တံတောင်ဆစ် BSPT အမျိုးသား, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, တရုတ်ခုနှစ်တွင်ဖန်ဆင်း, လက်ကား, ဝယ်, ဖောက်သည်စတော့အိတ်များတွင်အစုလိုက်, စျေး, Pricelist, စျေးနှုန်း, High Quality
အထီးလမျးဖွောငျ့ Adapter ကိုသံမဏိအမျိုးအစားလမျးဖွောငျ့အမျိုးသား Tube Fittings ကိုက်